शरीरमा हुने कोठीले बताउछ तपाइको हातमा पैसाको बचत हुन्छ कि हुदैन
कतिपय मानिसहरु अत्यधिक खर्चालु हुन्छन् । उनीहरु पैसा बचत गर्नै सक्दैनन् । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार पैसा कमाएर पनि बचाउँन नसक्नुमा विभिन्न कारण हुन्छन्। सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ : शास्त्र मा लेखिए अनुसार हाम्रो सारिर मा हुने कोठी को धेरै नै महत्व रहन्छ हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंग हरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन समुन्द्र शास्त्र का अनुसार हाम्रो सरिरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउ ठाउ बाट फरक अर्थ दिई राखेका हुन्छन सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ !
कतिपय भागमा हुने कोठी ले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ ! हाम्रो सारिर को यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको हातमा पैसा टिक्दैन हेर्नुहोस ! यी भागमा कोठी भएका ब्यक्तिको हातमा पैसा अडिन्नः बायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भैहाल्छ ।बचत गर्न सक्दैनन् ।तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ । तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने कामुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई पैसा हात लागेपनि बचत हुँदैन । बायाँ आँखि भौंमा कोठी भएका ब्यक्ति पनि खर्चालु हुन्छन् । उनीहरुले विलासितामा पैसा खर्च गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।बायाँ आँखामा कोठी हुनु पनि रोगमा पैसा जाने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिको पैसा उपचारमा बढी खर्च हुन्छ ।